वर्षको समयको बावजूद, केटीहरू आकर्षक देख्न चाहन्छन्, एक पतला व्यक्ति छ। सबैलाई फिटनेसमा संलग्न गर्ने मौका छैन, व्यायामशालामा जानुहोस् र बीचमा, अनावश्यक रूपमा सबैभन्दा अनावश्यक ठाउँहरूमा जमा। विशेष रूपमा थप वसा पेट र जांघको अधीन हुन्छ। यो तथ्य यो हो कि मातृ प्रकृति यसको सुन्दर प्राणी को हेरचाह गर्दछ, र प्रत्येक संभव तरिका मा प्रजनन प्रणाली को संरक्षण को कोशिश गर्दछ। केवल धेरै मान्छे यस्तो प्रकारको हेरचाह गर्दैनन्, र तिनीहरू सबै तरिकामा फैटी जम्मा संग लड्न सुरु गर्छन्। आजको विषय आजको मोटो जलने क्रीम हो। सबै इच्छुकका लागि, हामीले उत्कृष्ट मूल्याङ्कन गरेका छौं।
क्रीमले कसरी मोटो जलिरहेको छ?
सुरु गर्नका लागि, म भन्न चाहन्छु कि पेट र जांघका लागि मोटो-जलने क्रीम अधिकतम पोषण मात्र उपयुक्त पोषण र शारीरिक निक्षेप संग संयोजन गर्दछ। सक्रिय आन्दोलनहरूमा समर्पित यो दिन कम्तिमा 20 मिनेटको लायक हो, यो हिड्न सक्छ, कुनै पनि अभ्यास।
त्यसोभए, मोटो जलने क्रीमले छालाको गहिरो तहमा काम गर्छ। यो चाँडो अवशोषित हुन्छ र चिपचिपाको असहज लगाउदैन। अवशोषित भएपछि, क्रीम सक्रिय रूपमा काम गर्न सुरु हुन्छ। यसले रक्त परिसंचरण सुधार्न, चयापचय वृद्धि गर्छ, लोच र लोभ बढाउँछ, कोलागेनको उत्पादनमा सुधार गर्दछ।
क्रीमको सहयोगमा भरोसा नगर्नुहोस्, यदि आंकडाको स्थिति चलिरहेको छ। उपचार केवल बोसो को बिरुद्ध युद्धमा मात्र मद्दत गर्नेछ, जुन भण्डारण गर्न सुरु भएको छ, र, धेरै ठूलो किलोग्राम संग, यो, अलार्म, पूर्ण रूपमा निर्वाह छ।
के म घरमा मोटो जलने क्रीम बनाउन सक्छु?
यदि तपाईंले धेरै कष्ट प्रयास गर्नुभयो भने, जसका निर्माताहरूले उनीहरूलाई पतला व्यक्तिको लागि युद्धमा मद्दत गर्नेछन्, र उनीहरूलाई मद्दत गर्थे, त्यसपछि तपाईं आफ्नै उपाय सिर्जना गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। उही महिलाहरु मा लागू हुन्छ जसले अधिग्रहित क्रीम को लागि एलर्जी प्राप्त गरेको छ। घर बनाइएको मोटो जलने शरीरको कर्जा तयार गर्न सजिलो छ, सबै आवश्यक सामग्रीहरू निःशुल्क उपलब्ध छन्।
सूखी समुद्री तरकारी (केड वा फुकुस) सानो मात्रामा उबलने पानीको साथ खानुपर्छ। यो लगभग 15 मिनेटको लागि ब्रेक गरौं, त्यसपछि फ्लेट क्रीम जोड्नुहोस्, ब्लेंडरसँग सार्नुहोस्। यो क्रीमलाई आधे घण्टाको लागि समस्या क्षेत्रहरूमा लागू गरिएको छ। सुत्न पछि, यो न्यानो पानी संग धोएको छ।
#2पकाउनुहोस्
उकालो पानीको साथ एक सुन्दर मोटी मासु प्राप्त गर्न कफी मैदान भाप गर्नुहोस्। आवेदनको आसानीको लागि, एक सानो मनपर्ने अरोमेटिक तेल थप गर्नुहोस्। आधा घण्टाको लागि समस्या क्षेत्रहरूमा लागू गर्नुहोस्, पानी संग कुल्ला।
पकाउनुहोस् # 3
शरीरको लागि 30 मिलियन लोशन जुननिपरन तेलका तीनवटा बिरुवाहरू, कफी निकाल्ने एक ड्रप र केन्ने मिर्च निकाटको एक ड्रपसँग मिश्रित हुनुपर्छ। हातमा मिश्रण पहिले Preheat, सुधार गर्न आवश्यक क्षेत्रहरूमा लागू। यो धुनुको लागि आवश्यक छैन।
Joyda Illu क्रीम वसा जलने क्रीम: समीक्षा
वसा विरुद्धको युद्धमा सुपरफर्मिक प्रयोगको लागि यो कोरियाली उपचार निकै लोकप्रिय भएको छ। उत्पादनको मूल्य यूरोपीय निर्माताहरूको क्यान्सरको तुलनामा धेरैलाई उपलब्ध छ। दायरामा पेट र जांघको लागि मोटो जलविद्युत मात्र होइन, तर हात र खुट्टाको क्षेत्र पनि।
महिलाहरूले लेख्नको लागि उत्पादन स्पर्शको लागी सुखद छ, राम्रो लागी लागी, छिट्टै अवशोषित हुन्छ। केही नोट कि गन्ध तीव्र छैन, तलीको आलुको स्वाद जस्तो। सम्भवतः यो संस्थाले अनिकालको कारणले गर्दा वजन बढ्ने महिलाहरु हानिकारक छन्।
त्यहाँ समीक्षाहरू छन् कि, क्रीम लागू गरे पछि, समस्या क्षेत्रहरू धेरै राम्रो देखियो, मोटो ध्यानपूर्वक गएका थिए। यो पनि लेखिएको छ कि छाला चिकनी बनाउँथ्यो, चिसो, चिसो भयो, सेलुलाइट गायब भयो।
"लेयरैक अल्ट्रा शरीर लिफ्ट"
यो शरीर क्रीम (मोटो जलाउने) सस्तो जस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ (करिब 2000 रुबल), तर यो क्रिया मात्र अद्भुत छ।
उत्पादन को एक भाग को रूप मा एक प्राकृतिक प्रोटीन छ कि खो दिए वसा को ठाँउ हो, र वजन खोने पछि छाला लटका नहीं। छाला अनियमितता संग सक्रिय क्याफिन संघर्ष, विशेष रूप से सेलुलाइट tubercles संग, परिसंचरण प्रणाली मा घुस बिना। एन्टिपीटिटिक प्रभाव को asparam छ। बाँकी अवयवहरू मोटो भण्डारसँग लड्ने, झण्डा हटाउँदै, वसा जम्मा रोक्न उद्देश्य राख्नु हुन्छ।
बालिकाहरूले आफैलाई यो औषधिको प्रभावको अनुभव गरे, दुई हप्ताको प्रयोग पछि उल्लेखनीय रूपमा वजन गुमाउँछ। सेलुलाइट हरायो, छाला लोचदार र कडा भयो।
"विलोज रस" बाट "सद्भावको वनस्पति कोड"
सबैभन्दा लोकप्रिय कस्मेटिक कम्पनीहरु मध्ये एक अनियमित वसा जलने क्रीम विकसित गरेको छ। यसको संरचनामा भारतीय छातीको निकास न केवल द्रुत जलविद्युत जलिरहेको छ, तर जीवको कार्यक्षमता बढ्छ। महिलाहरु यो उपाय को ध्यान दिनुहोस कि विवर्तन को एक भावना हो, म धेरै स्थानांतरित गर्न चाहन्छु, र यो, बारी मा, को क्रीम संग लडने को लागि क्रीम मा मदद गर्दछ।
"ओरेन्ज पेल" वनस्पति मूलको ग्लिसरीन हटाउनेछ। उहाँले छाला चिकाउनुहुनेछ, कडा।
एक क्रीम लागू गर्न यो एक महिना भित्र आवश्यक छ, र विशेषज्ञ संग परामर्श, यो प्रभाव को मजबूत गर्न को लागी, वसा को जल को लागि ट्याबलेट स्वीकार गर्न सम्भव छ सम्भव छ।
आयोडेस फान्गो - मिड आधारित क्रीम
यो उपकरण महिलाहरु जो अझै पनि बस्न नसक्ने लागि आदर्श छ, धेरै उत्तीर्ण, बिहान वरपर चल्न र अतिरिक्त किलोग्राम विरुद्ध लडाइँमा खेलको लागि जानुहोस्। यो मोटो जलने क्रीम विशेष गरी चाँडै काम गर्दछ, तर केवल शारीरिक व्यायाम संग। यदि तपाईं यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ र सोफेमा झूट भने यो बेकार हुनेछ।
Laminaria र अनानास निकाट वसा ब्रेक गर्न, चयापचय तेज। आइवी र साइप्रस कोणहरूको निकासी एडपोज ऊतकमा ओक्सीजन उद्धार गर्दछ, यसको चाँडो क्षणमा योगदान पुर्याउँछ।
क्रीमले लुगा खान्छन्, यो सिधै अभ्यास भन्दा पहिले लागू हुन्छ। यो केवल फैटी जम्मा र सेल्युलाईट संग लड्न को लागि सक्षम छैन, तर पनि चलने पछि, एरोबिक्स र अन्य अभ्यास को समयमा दबाव बढन को रोकन को लागी मांसपेशिहरु को तहत र पछि को व्यायाम गर्न को लागि।
"टर्बोसिले" दिन / रात
आउनुहोस् मात्र आयातित माध्यमहरू मात्र होइन, तर घरपरिवार पनि। समीक्षाहरूको अनुसार, देशी निर्माताहरूले धेरै उच्च गुणस्तर उत्पादनहरू आयात गर्छन्, आयातबाट प्रभाव नपर्ने तर धेरै कम।
त्यसोभए, "टर्बोसिम" (मोटो जलने क्रीम) मात्र करिब तीन सय रूबल खर्च गर्दछ। तपाईं केवल दिन वा रातको लागि मात्र खरीद गर्न सक्नुहुनेछ, तर घडीको वरिपरि यो प्रभावकारी हुन्छ जब यो।
दबाइ अमीनोफिललाइनको हृदयमा, भिटामिन ई, सोयाबिन तेल र अल्गा निकाल्नु। एकैसाथ, यी अवयवले शाब्दिक माटो तह पिघ्यो। लिम्फाटिक नलिकाहरू सफा गरिएका छन्, छालाको तह तहमा एक जल निकासी प्रणाली सुरू हुन्छ, शरीरबाट अत्यधिक तरल नष्ट हुन्छ।
अन्य घटक सेलुलाइट विरुद्ध लडाइँमा मद्दत गर्दछ, छाला कोट र लोचदार बनाउनुहोस्।
"Turboslim" (बोसो-जल क्यान्सर) समीक्षाहरूले सबैभन्दा सकारात्मक पायो। धेरै महिलाहरु पहिले देखि नै धेरै वर्ष को लागि यो उपाय को लागी आफ्नो आंकडा मा विश्वास गर्दा यो आवश्यक हुन्छ। क्रीम संग एकसाथ यो त्यहि फर्मको ट्याबलेट प्रयोग गर्न सम्भव छ।
मान नगर्नुहोस् कि मोटो-जलाउने क्रीम मात्र ट्यूबमा हुन सक्छ, र यो निचोड हुनुपर्छ। आधुनिक विकासले महिलाहरूले आफ्नो हात गहिरो पार्न नदिने, र समस्याको क्षेत्रमा स्प्रे गरेर फस बर्नर प्रयोग गर्दछन्।
यो फिटनेस स्प्रे, "तीन-सक्रिय" भनिन्छ, केवल दुई सय रूबल खर्च गर्दछ, तर यसको गुणहरू आयातित निर्माताहरूको लागि कम छैन।
यस एजेन्टमा निस्सन्देही पौधेको उत्पत्ति फैटी जम्माको विरुद्धको लडाइँमा मद्दत गर्दछ, तिनीहरूलाई विभाजित गर्दछ र तिनीहरूलाई हटाउनुहोस्। यो पनि सेलुलाइट विरुद्ध एक सक्रिय लडाइँ।
यो भन्नुपर्दछ कि क्रीम क्रीम बोसो ज्वरो पुरानो फारमहरू छिटो बहाल गर्न मद्दत गर्दछ। अनुप्रयोगको फरक फरक छ, यो प्रयोग गर्नु अघि निर्देशन पढ्न आवश्यक छ।
अनुहार गर्न इंजेक्शन। अनुहार को कायाकल्प लागि लोकप्रिय उत्पादनहरु
के राम्रो रंग एक फुलेको कपाल माथि कपाल र पेंट lightens?
नियमहरूमा र सम्भव विचलन: कस्तो महिलाको हेमोग्लोबिन हुनुपर्छ
एक फिर्तीको लागि प्रभावकारी जमीन जायदाद: पाठ र समीक्षा सूची
आफ्नो कम्प्युटर को लागि एक ग्राफिक्स कार्ड कसरी चयन गर्न
घुम्रेको कपाल को लागि एक शैंपू कसरी चयन गर्ने?
घर मा बाल हावा कसरी धेरै तरिकाहरू